Daraasado Kiis ah oo loogu talagalay Suuqgeynta: Daacad ma noqon karnaa? | Martech Zone
Talaado, Disembar 3, 2019 Talaado, Disembar 3, 2019 Douglas Karr
Ka shaqeynta warshadaha SaaS in badan, waxaan sii wadaa taaha inta aan soo dejinayo oo aan aqrinayo daraasadaha kiisaska. Ha igu qaldan, runtii waxaan ka soo shaqeeyay dhowr shirkadood oo aan ka ogaanay macmiil waxyaalo yaab leh ku samaynaya barxaddeenna ama aan ka helnay natiijooyin aan caadi ahayn… waanan riixnay oo aan kor u qaadnay daraasad kiis oo iyaga ku saabsan.
Suuqgeyntu maahan wax iibsasho ah, in kastoo. Suuqgeyntu waxay ku saabsan tahay ogaanshaha rajada weyn, iyaga oo siinaya cilmi baarista ay u baahan yihiin si ay wax ugu iibsadaan, ka dibna u sii hayaan macaamiisha waaweyn ee kor u qaadaya soo noqoshadaada maalgashiga suuq geynta.
Dejinta rajooyinka waallida ah ee ka imanaya macmiilka duufku ma ahan suuqgeyn weyn, waxay la mid tahay xayeysiin been ah - mooyee in loo qoro si wax ku ool ah oo daacad ah.
Tilmaamaha Qoraalka Daraasad Kiis Weyn
Ma dhahayo iska ilaali daraasadaha kiisaska ee macaamiisha helay natiijooyin fiican. Waxaan u maleynayaa inay gabi ahaanba tahay istiraatiijiyad weyn in lala wadaago sheekooyinka macaamiishaada kuwa ka faa'iideystay ama ay si fiican ugu adeegeen alaabadaada ama adeegyadaada. Laakiin qoraal ahaan daraasadda kiiska, waxaad u baahan tahay inaad ka taxaddartaa inaad macaamiishaada xigta setting ama macmiil u adeegsada daraasadda kiiska inuu ku wareejiyo go'aanka iibsashada kooxdooda gudaha. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo:
Background - waxay siinayaan waxoogaa taariikh ah oo ku saabsan macaamiisha iyo waxa ay isku dayayeen inay ku guuleystaan.
Human Resources - la hadal ilaha gudaha iyo dibedda ee hibada ee macaamilku dalbaday taasoo gacan ka geysatay gaaritaanka natiijooyinka cajiibka ah.
Kheyraadka Miisaaniyadda - la hadal miisaaniyadda gudaha ee lagu dabbaqay hindisaha.
waqtiga - xilliyada iyo jadwalka waqtiyada badanaa wuxuu door ka ciyaaraa sida ugu wanaagsan ee hindisaha lagu gaari karo natiijooyinka. Hubso inaad kula wadaagto kiiskaaga.
Celceliska - dejiso waxyaalaha laga filayo celceliska natiijooyinka ay macaamiishu ku guuleysan doonaan iyada oo aan la helin karti, miisaaniyad, iyo waqtiga uu macmiilkani dalbaday.
Rasaasta iyo Wicitaanada - hubi inaad tilmaamaysid oo dhan canaasiirta keentay natiijooyinka ka sarreeya.
Tixraaca macaamilku wuxuu helay 638% soocelin maalgashi waa kiis daraasad heer sare ah oo la wadaagi karo… laakiin dejinta rajooyinka sida ay ku gaareen wixii ka baxsan badeecadaada iyo adeegyadaada ayaa xitaa ka sii muhiimsan!
goobta laga filayo waa istiraatiijiyad muhiim u ah suuqleyda inay kordhiyaan haynta iyo qiimaha nolosha macmiil kasta. Haddii aad dejineysid waxyaabo rajo xumo ah oo celceliska macaamilku uusan gaari karin, waxaad yeelan doontaa macaamiil xanaaq badan. Waana sax sidaas, aragtidayda.
Quraafaad, khaldan, iyo kirada
Runtii waxaan rajeynayaa inaad ka heshay Quraafaad, khaldan, iyo kirada taxane aan ka shaqeynaynay! Waxay dareen xoog leh ka helayaan kanaalkeena bulshada waana jeclahay dadaalka ay wada-hawlgalayaasha wax-soo-saar ee Ablog Cinema ay taxanaha u dhigayaan.
Waa tan Qoraal:
AJ Ablog: [00:00] Doug, iska hubi. Marka waxaan arkay daraasaddan, oo waxaan soo iibsaday digirtan sixirka ah.
Douglas Karr: [00:06] Digir sixir ah?
AJ Ablog: [00:06] Digirradan qaxwaha sixirka ah, haa. Waxay u maleynayaan inay daaweynayaan kansarka.
Douglas Karr: [00:10] Ma haysaa digir kafee ah oo daaweeya kansarka?
AJ Ablog: [00:12] Waxaan haystaa digir kafee ah, haa. Eeg? Kaliya aqri, kaliya aqri.
Douglas Karr: [00:16] Qiijiye Quduus ah. Wuxuu daaweeyaa kansarka. Bidaarta qaabka labka. Cilad kacsi. Calool fadhiga Marxaladda cabsi.
AJ Ablog: [00:23] Waxay kaloo xallisaa Tirinta [Choculitis] [00:00:24].
AJ Ablog: [00:27] Maya, taasi waa filim. Waxaa kafaala qaaday filimka.
Douglas Karr: [00:30] Xawaaraha internetka oo gaabis ah? Waxaan la yaabanahay yaa qoray kiisaskaas daraasadda ah.
AJ Ablog: [00:34] Ma garanayo, waan arkay uun, waan akhriyay, runtiina waa run.
Douglas Karr: [00:37] Sidee u shaqaysaa?
AJ Ablog: [00:39] Wali iskuma dayin.
Douglas Karr: [00:41] Aynu tagno xoogaa kafee ah.
AJ Ablog: [00:43] Waa hagaag, aan sameyno.
AJ Ablog: [00:51] Ku soo dhawow quraafaadka-
Douglas Karr: [00:52] Khaldan-
AJ Ablog: [00:53] Iyo Rants, riwaayadda aan Doug iyo aniga jecelnahay inaan kaga hadalno waxyaabaha ku jira internetka ee runti na dhibaya.
Douglas Karr: [00:59] Haa, iyo bandhigga maanta wuxuu ku saabsan yahay ballamo, ballanqaadyo ay shirkaduhu ku sameeyaan daraasad kiis.
AJ Ablog: [01:05] Sida balanqaadyada aabbahaa sameeyey oo aanu weligii fulin.
Douglas Karr: [01:10] Taasi waa nooc mugdi ah. Laakiin waxaad arkeysaa maalin kasta, gaar ahaan waxaan ku jiraa barnaamijyo badan, sidaa darteed waxaan caawiyaa shirkadaha softiweerka. Waxayna qaataan hal macmiil, waxay heleen hal natiijo gaar ah, oo aan caadi aheyn oo ay ku adeegsanayaan barnaamijyadooda, waxayna yiraahdaan, "Ilaahayow, waa inaan ku qornaa taas kiis daraasad." Marka waxaad helaysaa daraasaddan, waana sida barnaamijkani u kordhiyay soo noqoshadooda maalgashiga 638% ama waxkastoo ay yihiin. Wax walbana waa, miyay yeelan karaan kumanaan macaamiil ah, hal macaamil ayaa helay natiijadaas. Uma oggolaan lahayn taas meel kale. Uma oggolaanayno shirkad dawooyinka soo saarta in uu jiro bukaan kansar qaba oo qaata asbiriin markii kansarku ka baxo, oo dhaha “haye, asbiriinkaan wuxuu daaweeyaa kansarka.” Marnaba ma oggolaan doonno taas, laakiin sababo jira awgood kiisaska, waan u oggolaannay mar walba. Dhibaataduna waxa weeye inay jiraan ganacsiyo iyo macaamiil halkaas u baxa oo akhriya kiiska daraasadda, oo ay-
AJ Ablog: [02:15] Runtii ma oga.
Douglas Karr: [02:16] Haa, waxay dareemayaan inay run tahay, sida shirkad aan loo ogolaan doonin inay been sheegto.
Hadalka: [02:21] Been ma aha haddii aad rumaysato.
Douglas Karr: [02:24] Shirkadduna been ma sheegto.
AJ Ablog: [02:27] Laakiin runta oo dhan kuuma sheegayaan.
Douglas Karr: [02:29] Sax. Iyagu waa nooc uun isticmaalaya xaaladdan sida ugu fiican u dhacda. Waxaa laga yaabaa inay ahayd madal suuq ama wax kale oo ay lahaayeen koox suuq geyn weyn, waxayna ahayd xilligii ay ganacsiga ugu badnaa ka heli jireen, tartankooduna hadda uun ganacsiga wuu ka baxay, oo qiimahooda ayaa mar uun hoos u dhici lahaa. Oo haddaba waxaas oo dhan marka la isku daro waxay kordhiyeen natiijooyinkooda 638%.
AJ Ablog: [02:52] Sax, ama waa sida shirkad fiidiyoow leh oo leh, "Haye fiiri, fiiri sida weyn ee ololahan u dhacay," marka laga reebo xaqiiqda ah in astaantaasi horeyba u lahayd dad badan oo raacsan. Waxay ku sameeyeen wixii ay ahayd inay ka qabtaan arrimaha bulshada. Ma ahan fiidiyowga laftiisa, laakiin wuxuu ahaa dhammaan waxyaabihii kale ee lagu daray, ka dibna iyaga ayaa qaadanaya amaah iyagoo leh, "Oh, fiiri waxa fiidiyowgaygu kuu sameeyay."
Douglas Karr: [03:12] Sax. Marka waxaan dhihi lahaa shirkad ahaan, mid ka mid ah dhibaatooyinka aad hoos ugu sii dhaceyso taas waa markii aad dejisid himilooyinkaas weyn ee macmiilka, in hadda macmiilku uu ku soo socdo marki uu akhriyo kiiskaas daraasadda uuna rajeynayo waxqabadka noocaas ah.
AJ Ablog: [03:31] Isla natiijadaas, haa.
Douglas Karr: [03:32] Markaa shirkadahaani waqti badan ayay ku tuuraan daraasaddaas daraasadda ah halkaas, runtii way ku faanaan, way bilaabaan inay ganacsi ka helaan, ka dibna waxay helaan macaamiil niyad jabsan. Markaa arrintaydu waxay tahay, haddii aad samaynaysid daraasad kiis, ma dhahayo ha u isticmaalin mid qof helay natiijooyin aan caadi ahayn.
AJ Ablog: [03:47] Sax, oo waxaa jira waxyaabo badan oo daraasad kiis wanaagsan ah oo halkaa ka jira.
Douglas Karr: [03:49] Haa, laakiin daacad ka noqo daraasadda kiiska. “Haye, kani ma aha nooca jawaabta caadiga ah ee aan helno. Kuwani maahan nooca natiijooyinka caadiga ah. Halkan waxaa ah seddex arrimood oo horseeday kobaca marka laga reebo barnaamijkeenna ama aan ka ahayn software-ka. ”
AJ Ablog: [04:04] Sax. Daacad noqo oo himilooyinka dejiso.
Douglas Karr: [04:06] Haa, kaliya daacad noqo. Waxaan u maleynayaa in daraasad kiis ay tahay fursad aan caadi aheyn oo lagu baro macmiilkaaga xiga ama rajadaada xigta ee ku saabsan waxa suuragalka ah, laakiin maahan waxa caado noqon doona.
AJ Ablog: [04:20] Xaq, adigu kama tihid kuwa ka mid ah kuwa wax iibiya 3:00 AM ee leh, "Tani waxay kugu dhici doontaa wakhti kasta maxaa yeelay taasi waa waxa aan sameyno."
Ganacsi: [04:29] Iyo waxa fiican ee ku saabsan dhaqankan katanas… oh, taasi way dhaawacday. Oh Taasi waxay dhaawacday waqti weyn. Qeyb ka mid ah taas, kaliya caarada ayaa i heshay, Odell.
Douglas Karr: [04:40] Macaamiisha iyo ganacsiyada akhriya daraasadaha kiisaska, fadlan ku qaado iniin cusbo ah ama gadaal u riix. Haddii qof yiraahdo, “Waxaan helnaa noocan ah 638% ROI,” gadaal u riix oo waxaad ku tidhaahdaa, “Waa maxay celceliska ROI ee aad macaamiisha ka helayso?” Kadibna shirkadaha bixinaya daraasaddan kiisaska ah, waxay sheegeen in tani ay ahayd natiijo aan caadi ahayn oo ay heleen nimankan, laakiin waa inaan kaaga warrannaa sababta oo ah waxay ahayd hal abuur, waana kanaa dhammaan waxyaabaha kale ee ku been abuurtay. Iminkana waxa aad qabanaysid ayaa ah inaad caawinayso macmiilkaaga xiga, oo aad leedahay, “Haye, waxaan jeclaan lahaa inaan helo natiijooyinka ay heleen. Waan ogahay inaan u maleyneyno inaan helin kuwaas, laakiin fiiri, goorta ay sidan sameeyeen, tan, tan, iyo tan - “
AJ Ablog: [05:24] "Waxaanna sameyn karnaa wax aad u eg-"
Douglas Karr: [05:26] "Waxaan samayn karnaa wax la mid ah oo aan kordhin karno natiijooyinkeenna," waxaanan u maleynayaa inay taasi tahay get markaa ka bax kooxdan kaliya ee muujineysa natiijooyinkaaga uber-weyn ee ugu dambeeya, iyo dejinta rajooyinka kaa maqan ee macaamiishaada iyo alaabadaada. Ka dibna shirkadaha iyo macaamiisha wax iibsanaya, noqo kuwa shaki leh. Ka noqo shakiga daraasadahaas kiisaska ah.
Hadalka: [05:49] Waan furi karaa indhahaaga. Waan furi karaa indhahaaga.
AJ Ablog: [05:57] Marna ma jirtay waqti rag ah oo lagu khiyaaneeyey xaalad daraasad ama xayaysiis nooc kasta oo dareen ah? Waxaan jeclaan lahaa inaan ku maqlo iyaga faallooyinka hoose. Hadaad jeceshahay fiidiyowgaan, hubso inaad jeceshahay oo aad qorto, waxaanan kugu arki doonnaa fiidiyaha xiga.
Tags: kiis daraasad been ahFiidiyowyada Suuqgeyntakhuraafaadka